Nezvedu - "EducationBro" - Kudzidza Kunze Kwenyika Magazine
Tiri wechiduku chirongwa, asi ane nhoroondo huru uye kunakidza. The havaoni chacho ndokuenda kuburikidza zvakawanda pave zvachose idzva, yakasiyana uye anobatsira “EducationBro” – Kudzidza Kunze Kwenyika Magazine.
chikwata dzemunyika inoumbwa vadzidzi dzemarudzi uye vadzidzisi vane ruzivo rukuru, Rector ari kuyunivhesiti, vaduku Entrepreneurs uye kushingaira vanhu vane dzinonakidza upenyu zvakaitika.
Tinoziva matambudziko dzidzo kunze:
Mazuva ese, tiri kutaura zvimwe zvitsva kuti dzidzo yako mhiri kwemakungwa vasununguka.
Munhu wose anofanira kuva mukana wokugamuchira dzidzo munyika umo yaanoda uye “EducationBro” will helps with it. The “EducationBro” magazini ane “muromo iceberg”, nokukurumidza isu kuchaita kuti kusarudza basa kuti uchifarira. Sarudza nyika ichaita kukunakira uye unhu dzidzo, uye mari dzidzo uye mararamiro. Enroll to the best university and easy to get a quality education. Zvino kutanga basa chero nyika munyika.
All ichi “EducationBro” anogona.